Encyclopedia ee caafimaadka
Su'aal soo noqnoqota: Rheumatoid arthritis ma ku dhacdaa labada dhinacba?
Category: Lafaha 0
Marka uu cudurku sii socdo, calaamaduhu badanaa waxay ku faafaan curcuraha, jilbaha, anqawyada, xusullada, miskaha iyo garbaha. Xaaladaha badankood, astaamuhu waxay ku dhacaan isla isku -darka labada dhinac…
Jawaabta ugu fiican: Sideed uga hortagtaa in ciddiyaha caguhu soo fuulaan?
Fuulayaasha ma helaan ciddiyaha ciddiyaha? Kabaha fuulitaanka dhagaxa waxaa loogu talagalay inay si fiican u habeeyaan, taas oo ah halka ay dhibaatadu ka timaaddo. Markaad cagtaada geliso kabo…
Muddo intee le'eg ayay qasabadda laf -dhabarka qaadataa?
Muddo intee le'eg ayay daloolidda lumbarku qaadataa? Daloolka lumbarku wuxuu qaataa qiyaastii 30 illaa 45 daqiiqo, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad jiifto isbitaalka…
Su'aal soo noqnoqota: Ma lagugu gelin karaa suuxdinta tubbada laf -dhabarka?
Suuxin maxalli ah ayaa lagu durayaa dhabarkaaga hoose si loo suuxiyo goobta daloolka ka hor inta aan cirbada la gelin. Daawada suuxinta ee deegaanka ayaa si yar u taari doonta markii la duray….
Su'aashaada: Ma jiraa gargaar dhaqaale oo loogu talagalay dadka qaba arthritis -ka?
Ururka Bukaan-socodka Helitaanka Bukaanku wuxuu siiyaa taageero maaliyadeed shaqsiyaadka leh RA, oo uu daboolay Medicare, oo u baahan caawimo bixinta kharashaadka jeebka ka baxsan ee la xiriira toban dawayn oo wax ka beddelidda cudurka ah oo ay ansixisay FDA….
Kulaylka qallalan miyuu u fiican yahay rheumatoid arthritis?
Kuleylka qoyan, sida qubaysyada kulul, ayaa kaa caawin kara kuleylka inuu galo muruqyada waxaana laga yaabaa inuu bixiyo xanuun ka roon. Bixiyaha daryeelka caafimaadku wuxuu kugula talin karaa qalalan…
Maxaa sababa osteomyelitis joogto ah?
Inta badan kiisaska osteomyelitis waxaa sababa bakteeriyada staphylococcus, noocyada jeermiska sida caadiga ah laga helo maqaarka ama sanka xitaa dadka caafimaadka qaba. Jeermisku wuu geli karaa…
Su'aal soo noqnoqota: Waa maxay nidaamka ilaaliya maskaxda iyo xangulada lafdhabarta?
Meninges waa xuubyo daboolaya oo ilaaliya maskaxda iyo xangulada lafdhabarta. Waxaa jira saddex lakab oo meninges ah: Dura mater, oo u dhow lafaha. Arachnoid, oo…
Maxaa dhacaya marka aadan lahayn seedaha?
Haddii aan la daaweyn, aakhirka waxay sababi kartaa dhibaatooyin kale oo cagta iyo lugta ah, sida barar iyo xanuun ku dhaca seedaha cagahaaga (plantar…
Immisa daqiiqo halkii pound ayaad karisaa dhexda doofaarka?
Intee in le'eg ayaan kariyaa jilicsanaanta doofaarka ama dubitaanka doofaarka? Xeerka suulka ee hilibka doofaarka waa in la kariyo 25 daqiiqo halkii pound hilib…
А ku saabsan qoraaga
Hello, magacaygu waa Maryan. Baaladayda waxaan kula wadaagaa maqaallo xiiso leh oo ku saabsan xirfadayda - waxaan ahay dhakhtar lafaha.
Su'aal: PRP ma daaweyn kartaa arthritis?
Maxaad dareentaa markaad qabtid lafo -beelka?
Su'aashaada: Maxaa dhacaya haddii aan aad u lugeeyo ka dib beddelka misigta?
Su'aal: Muxuu septic arthritis -ku ku sameeyaa jirka?
Miyaad xiran kartaa kabaha lo'da oo leh lug suuxsan?
UTI ma keeni kartaa osteomyelitis?
Su'aashaada: Ashwagandha ma u fiican tahay osteoarthritis?
2021 XNUMX Dhakhtarkaaga dhaqtarka